अनमोलको अंगालोमा बोल्ड उपासना
काठमाडौं । दीवाकर भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘क्याप्टेन’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘रहर छ सँगै…’ बोलको रोमान्टिक गीत बिहीबार निर्माण टिमले राजधानीमा रेड कार्पेटसहित एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ । गीतको भिडियोमा अभिनेता अनमोल केसी र डेब्यु गर्ल उपासना सिंह ठकुरी फिचर्ड छन् । गीतले दुईको प्रेमभाव बोल्छ । सार्वजनिक गीतमा अर्जुन […]
झमककुमारीको ‘जीवन काँडा कि फूल’ २२ चैत्रमा
काठमाडौं । मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ कृतीमा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्र ‘जीव्न काँडा कि फूल’ चैत २२ गतेबाट दर्शकमाझ आउने भएको छ । बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको प्रदर्शन मिति र दुइ पोष्टर सार्वजनिक गरेको हो । अकाश अधिकारी, मोहन निरौला, लय संगौला, […]
वर्षा र सुरक्षासँग मिलेर गाई पाल्दै विपिन !
काठमाडौं । आउँदो माघ १८ गते बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको विपिन कार्कीको अभिनय रहेको पछिल्लो चलचित्र ‘गोपी’को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको पोस्टर हेर्दा चलचित्र गाउँले परिवेशको रहेको बुझिएको छ । चलचित्रको पोस्टरमा नायिकाद्वय वर्षा राउत र सुरक्षा पन्तसँगमिलेर नायक विपिन कार्कीले गाई पालन गरेका छन् । चारवटा पोस्टरमध्ये सबैमा विपिनको उपस्थिति छ । […]
निरुता यस्ती देखिइन् (पाँच तस्विर)
काठमाडौं । मह संचारको प्रस्तुति तथा किरण केसीको निर्माणमा छायांकनरत चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’मा पुरानी अभिनेत्री निरुता सिंहको पनि प्रमुख भूमिका छ । यही चलचित्रका लागि उनी भारतबाट नेपाल आएकी हुन् । नेपाल आए लगत्तै उनले अब नेपाली चलचित्रमा निरन्तरता दिने बताएकी छिन् । नायिका निरुता दाल, भात, तरकारीमै व्यस्त बनिरहेका बेला छायांकनस्थलबाट उनका केही […]
‘चौका दाउ’मा बोल्ड वर्षा !
काठमाडौं । अहिलेकी चर्चित अभिनेत्रीका रुपमा वर्षा राउत अग्रपंक्तिमा प्रर्छिन् । एकपछि अर्को गर्दै उनले चलचित्रमा सफलता हात पारेसँगै उनको चर्चा चुलिएको हो । हालै उनको अभिनय रहेको चलचित्र ‘चौका दाउ’ टोलीले हालै चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक ग¥यो । उक्त ट्रेलर पछि वर्षाको चर्चा थप चुलिएको छ । ट्रेलरमा वर्षा बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत भएकी छिन् । […]
काठमाडौं । चर्चित गायिका साहिमा श्रेष्ठले राजधानीबासीलाई नचाउने भएकी छन् । क्रिसमस डेको अवसर पारेर आगामी पुस १० काठमाडौ बिजनेश पार्क टेकु अवस्थित मसला कटेज एण्ड लन्चबारले आयोजना गर्न लागेको ‘क्रिसमस विथ कलाकार’कार्यक्रममा उनले आफ्ना प्रस्तुतीमार्फ दर्शक नचाउने भएकी हुन् । मसला कटेजकै आयोजना रहेको कार्यक्रममा आफुले तिम्रो डोला डोला हातमा, तिम्रो पिक्चर हिट, हेरेको […]
काठमाडौं । डेब्यु फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’बाट अभिनय यात्रा थालेका सलिनमान बनियाँ अहिले चलचित्र ‘यात्रा’को पर्खाइमा छन् । फरक हेयर स्टाइल र पहिरनका कारण प्रायः चर्चामा रहने उनी लगभग डेढ वर्षपछि पर्दामा देखिँदैछन् । उनी अभिनीत नयाँ फिल्म ‘यात्रा’ यस वर्षको चैत २९ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसमा उनी एक भल्गरको भूमिकामा छन् । […]
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेर सफलता बटुल्ने कलाकार थोरै छन् । त्यसो त कम मात्रामै चलचित्र सफल हुन्छन् भने कलाकार पनि कम मात्रामा नै त सफल हुने भए । यो स्वभाविक हो । तर, सवै एकै क्षेत्रमा सफल हुन्छन् भन्ने पनि छैन । एउटै क्षेत्रका पनि फरक फरक कार्य र भूमिका हुन्छन् । ती […]
पुष्पलसँग आँचलको जोडी (पाँच तस्विरमा)
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रमा स्थापित कलाकारको नाम लिनुपर्दा आँचल शर्माको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनले अभिनय गरेका हरेक चलचित्रमा उनको भूमिका लाई दर्शकले रुचाउँदै आएका छन् । चलचित्र ‘नाइँ नभन्नू ल ४’, ‘जोनी जेन्टलम्यान’ र ‘शत्रु गते’मा उनको जाडी अभिनेता पल शाहसँग बाँधिए थियो । एकपछि अर्को गर्दै चलचित्रमा यी दुईको जोडी दर्शकले देखपछि ‘पल […]
‘प्रसाद’ ग्रहण गरौंः धुर्मुस–सुन्तली
काठमाडौं । गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र प्रसादले दर्शकको साथ पाइरहेको छ । चलचित्र हेर्न हलमा दर्शकको बाक्लो उपस्थितिले निर्माण पक्ष यतिबेला निकै उत्साहित बनेको छ । चलचित्रले स्वदेशमा आक्रामक व्यापार गरिरहेका बेला विदेशबाट समेत माग उच्च भएको निर्माण पक्षको भनाइ छ । निर्देशक दिनेश राउत निर्देशित चलचित्र प्रसादले तीन दिनमा २ करोड बढीको कलेक्सन […]
महाधिवेशनस्थल छाडेर काठमाडौं पुगे लालबाबु पण्डित